हात धुँनाले केबल कोरोना मात्र होइन, यी रोगहरुबाट पनि मिल्छ सुरक्षा - Seto Khabar
२९ आश्विन २०७७, बिहीबार १२:३३
हरेक बर्ष १५ अक्टोबरमा विश्वभरमा ग्लोबल ह्यान्ड वाशिंङ डे यानी विश्व हात धुने दिवस मनाउने गरिन्छ । यसलाई मनाउनुको उदेश्य हातलाई राम्रोसँग धुनुको फाइदा र महत्वको बारेमा जागरुकता फैलाउनु् हो । केयौ डाक्टरहरु बताउने गर्छन कि हात नधुनाले सबैभन्दा धेरै बिरामी पर्ने गरिन्छ । हातबाट सजिलै संक्रमण मानिसको शरिरमा प्रवेश गर्दछ र बिरामी हुने गर्दछ । अब कोरोना भाइरसको नै कुरा गर्ने हो भने यो रोग पनि हातले नै अनुहार, मुखमा छुदा फैलिरहेको छ ।
किन हात धुनु यति जरुरी छ ?
हात धुनु एउटा औषधि जस्तै हो । यदि तपाई हात धुनु हुदैन भने भाइरसको संक्रमण वा ब्याक्टेरियाको सम्पर्कमा आउन सक्नुहुनेछ, जसको कारण तपाई बिरामी पर्न सक्नुहुन्छ र औषधिको आवश्यकता पर्न सक्छ । तर, तपाई नियमित रुपमा साबुन पानीले हात धुनु हुन्छ भने तपाईमा संक्रमण हुने खतरा कम हुन्छ ।
हात नधुँदा हुन सक्ने रोग
फोक्सोसँग जोडिएका रोगहरु
छालासँग सम्बन्धि रोगहरु
हात, खुट्टा र मुख सम्बन्धि बिरामी
हातलाई कसरी धुने ?
विशेषज्ञको कुरा गर्ने हो भने हात सफा गर्नको लागी साबुन र पानीले कम्तिमा २० सेकेन्डसम्म हात मिचिमिचि धुनु पर्दछ । र त्यसपछि एउटा सफा कपडाले हातलाई राम्रोसँग पुछ्नु पर्दछ । यसो गर्नाले हातबाट लाग्ने रोगहरुबाट बच्न सकिन्छ ।
कहिले कहिले धुने हात ?
खाना खानुभन्दा अगाडि र खाना खाएपछि साबुन पानीले हात धुने ।
दिशापिसाब गरेपछि हात धुनु अत्यधिक जरुरी हुन्छ ।
धुलो र माटोमा काम गरिसके पछि हात साबुन–पानीले धुनु पर्दछ ।
कुनै जनावरलाई छोएपछि हातलाई साबुन पानीले धुनु अत्यावश्यक हुन्छ ।